Kolombia: Ny Fanakatonana Ny Gazetiboky Cambio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2017 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Ny 8 Febroary 2010, andro iray talohan'ny fankalazàna ny Andron'ny Mpanao Gazety, nakatona vonjimaika ny gazetiboky Kolombiana “Cambio,” [es] (Fiovàna) izay nanokan-tena ho amin'ny fanaovana tatitra fanadihadiana sy fiampangàna. Tamin'ny 1994 ilay gazetiboky no naorina, saingy taona telo lasa izay dia novidian'ny Publishing House El Tiempo, izay tompon'ny betsaka indrindra amin'ny gazety ao Kolombia, ary ny “Planet Group” avy any Espaina no tompon'ny fampiasambola betsaka indrindra ao aminy. Ankehitriny, nanomboka niverina nanao ny asany ilay gazetiboky ary tsy ho isankerinandro intsony, fa ho isambolana, ary handrakotra lohahevitra samihafa mifantoka kokoa amin'ny fialamboly.
Nofoanan'ny Publishing House ny fifanaraham-pitantanana tamin'ireo mpamoaka lahatsoratra María Elvira Samper sy Rodrigo Pardo, ary nampahafantariny azy ireo fa noho ny antony ara-toebola no nandraisana ny fanapahankevitra satria zara raha velona ilay gazetiboky. Nilaza ny heviny taminà fotoana isankarazany ireo roa mpanao gazety ireo, hoe antony ara-politka no nanakatonana ilay gazetiboky.
Tanatin'ny laharana tsirairay navoakan'ny “Cambio,” nisy hatrany ny fiampangàna henjakenjana ka nahatonga azy ireny ho ampahany lehibe amin'ny olana mapiasa saina ny olompirenena. Anatin'ireo fiampangàna marobe, nisy ny famborahana ny fanararaotana nataon'ilay minisitra teo aloha nisahana ny fambolena, Andrés Felipe Arias, izay akaiky tokoa ny filoha Álvaro Uribe, ary ny fandaharanasa “Agro Ingreso Seguro,” (Antoka ho an'ny Fidirambolan'ny Tantsaha) izay nanohana ireo tantsaha, saingy nahafahan'i Arias nizara volabe ho an'ny vondrona iray misy ireo mpandraharaha izay nandray anjara tamin'ny fampielezankevitry ny filoha nandritra ny fifidianana.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ity asa fanaovana gazety mpanadihady sy mpiampanga ity dia nampitombo ny ahiahy sy nahatezitra mihitsy aza ireo manampahefana ao amin'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany, noho ny namoahany antsipirihany momba ilay fifanarahana tamin'nhy 2009 nifanaovan'ny governemantan'i Kolombia sy Etazonia amin'ny hametrahana toby miaramila 7 ao Kolombia.
Nahataitra sy nampivalaketraka ireo mpanao gazety sy ireo mpikirakira ny media tranainy ilay vaovao naborak'ilay gazetiboky, hatramin'ny fanehoankevitra teny anivon'ny tontolon'ny bilaogy, indrindra noho izy ireo tsy nijery ireo antony ara-toekarena ho toy ny tohankevitra azo raisina hanesorana ilay gazetiboky tsy ho hita eny amin'ny tsena intsony.
Daniel Ramos avy amin'ny gazetiboky dizitaly Equinoxio [es], manome ny fandalinany antsoiny hoe “Metamorphosis” (Fiofòna) ao anatin'ity andinin-tsoratra manaraka ity:
Iray amin'ireo nofinofy tena malaza indrindra (sy ilaina) aty Kolombia ilay iray izay nafafin'ilay filoha teo aloha Turbay Ayala nandritra ny andian-taona 1970: “Tsy maintsy raisina amin'ny tena habeny marina ny kolikoly.” Homamiadana ny kolikoly, mikiky sy manimba izay fomba rehetra tokony hisian'ny fahaizamitantana. Iray amin'ireo fangaro fototra hanatratrarana izay nofinofy izay ny fisian'ny media mpitsikera, mavitrika mibanjina ny hoavy, mpanadihady, ary mahomby, toy ny Cambio. Ireo mpamaky mandinika tsara dia afaka ny mahita mialoha izay hamintinana ity fanadihadiana nofinofy ity ho toy ny soratra an-drindrina manao hoe: Raha tsy misy fiovàna (kilalaonteny manondro ny gazetiboky Cambio, izay midika Fiovàna amin'ny teny Espaniola), tsy hitsahatra velively ny kolikoly ao Kolombia.
Momba an'io indrindra, hoy ilay mpanao gazety, Víctor Solano, ao amin'ny bilaoginy ¿Comunicación? [es] momba ilay fanontaniana avy amin'i Samper, toniandahatsoratra fahiny tao amin'ny Cambio, nandritry ny vovonana momba ny asa fanaovana gazety ( natao tao amin'ny Oniversiten'i Javeriana ao Bogotá:
Vantany vao vita ny famelabelarana, vitako ny nametraka ny fanontaniako faharoa sy nanararaotra ny fotoana handefasana fantsy, ampamoaka ho an'ireo mpanatrika. “(ho an'i) María Elvira (Samper): reko avy aminà loharano azo antoka teo amin'ny nanodidina ny 6.30. mn hariva teo ho eo, nibaboka tamin'i Rodrigo Pardo ny tena antony nanakatonana ny gazetiboky i Luis Fernando Santo (filohan'ny CEET, sady tompon'ny gazetiboky Cambio), nisy nifandraisany tamin'ny tsy fahazoana aina nanjo ireo mpikambana ao amin'ny Filankevi-Pitantanan'ireo Tale ilay izy, noho ireo fanadihadiana lalina novokarin'ilay gazetiboky; tamin'ny 7:25 hariva., eltiempo.com [es] namoaka dika iray hafa tanteraka mihitsy [es] izay nilaza fa olana ara-bola. Iza amin'ireo dika roa ireo no iray sisa ho tavela ao an-tsain'ny vahoaka Kolombiana?
Tsapako ho nitazona ny fofonainy daholo ny rehetra tamin'izay fotoana izay, ary ny maso rehetra niantefa teny amin'ny tavan'i Maria Elvira daholo, izay namaly nanitrikitrika hoe: “Ny tsy ofisialy. tsy mino aho hoe adala ny olona.” Tonga hatramin'ny filazàn'i María Elvira momba ireo ankamantatra marobe nahatonga azy ho resy lahatra tanteraka fa antony marina ara-potokevitra no nanosika ny fikatonan'ilay gazetiboky.
Ny vondrona Facebook “Tsy Fandehanana Mifidy Mavitrika ho toy ny Fitarainana – Aza Mifidy Amin'ny Fitsapankevi-bahoaka.ho afaka Milatsaka Hofidiana indray [es]” izay manao fanambaràna iray manohitra ny fanakatonana ilay gazety mpanadihady sy mpiampanga:
Tsy azo itokiana ny fialantsiny ofisialy hoe ny fanakatonana ny gazetiboky Cambio dia noho ny antony ara-bola! (…) Hafatra iray ho an'ireo mpanao gazety ao aminy sy ilay gazetiboky ny nanakatonana ny gazetiboky Cambio. Ny hafatra voatsipika ao anatin'io fanapahankevitra io dia ny maha-MAHALEOTENA, amin'ny filazàna izay eritreretinao, ary mety hitondra hatrany amin'ny fahafatesan'ny asanao ny fametrahana fanontaniana momba ny mpitondra.
Farany, Jaime Restrepo avy amin'ny bilaogy Atrabilioso [es], mamboraka ny fomba fijeriny, mifanohitra amin'ireo fomba fijery telo tetsy aloha:
Lazain-dry zareo fa afaka nanakatona ny gazetiboky Cambio i José Obdulio Gaviria (ilay politisiana sady mpanolotsaina ny Filoha Uribe). Kanefa, tsy mahaliana ny orinasa ny fanakatonana asa iray mitera-bokatra ho azy … tsy maningana amin'izany ny Planet Group. (…) Fanapahankevitra ara-pandraharahàna ny fanakatonana ny Cambio, izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny vola zara raha miditra no sady tsy resaka tsindry politika araka ny voalaza.
Araka izany tamin'ny Andron'ny Mpanao Gazety ao Kolombia, nankalazaina ny 9 Febroary 2010, marobe no mahatsapa fa misy rahona mitatao amin'ny fahalalahana maneho hevitra.